Global Voices teny Malagasy » Taorian’ny Horohorontany, Nanangana Gazetim-Paritra Ny Olo-tsotra Ao Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Oktobra 2012 3:14 GMT 1	 · Mpanoratra Keiko Tanaka Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fanabeazana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Voina
Zara fa misy mahalala ny voka-dratsin'ny ‘Horohorontany lehibe tao Atsinanan'i Japan’ (fantatry ny iraisampirenena ho horohorontanin'i Japana 2011 ) tao Otsuchi , tanàna kely ao amin'ny prefektioran'i Iwate. Tsy dia fantatra izany noho ny fikatonan'ny gazety ao an-toerana tamin'ny taona 2011 noho ny fahasimbana nateraky ny horohorontany, tsunami sy ny afo. Ankehitriny, nahomby ny fanentanana fanangonam-bola tamin'ny aterineto  [ja] izay nahazo vola 2.496.000 Yen (US$31,000 dolara) mba hanampiana amin'ny fananganana karazan-gazety vaovao.
Antsoina hoe Otsuchi Mirai Shimbun  (gazetin'ny Hoavy Otsuchi), mipàka any amin'ny olom-pirenena Otsuch iny gazety mba hampianatra azy ireo mitati-baovao, ary afaka misoratra anarana hanaraka fiofanana ny mpianatra any amin'ny oniversite manerana an'i Japana mba hanampy amin'ny fanatanterahana ilay gazety. Miasa amin'ny sehatry ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ity gazety zafindraony mitatitra vaovao isam-pokontany ity.
Tamin'ny volana Aogositra teo no natomboky ny Ivom-pampianarana ho an'ny mpanao gazety ao Japana  sy ny fikambanana mpanao asa soa, Volunteer Info , ny tetikasa izay miara-miasa amin'ny vondrona ao an-toerana.
Toerana misy ny Ōtsuchi. Sary tao amin'ny Wikipedia, Maximilian Dörrbecker (CC BY-SA 3.0).
Dika 250 no natonta tamin'ny famoahana voalohany ny Gazetin'ny Hoavy Otsuchi ary nozaraina tamin'ireo olom-pirenena ao an-toerana tamin'ny alalan'ny bisikileta. Azo jerena ao amin'ny aterineto  ny votoaty hita amin'izany.
Manome fiofanana ho an'ny mpianatra sy ny olo-tsotra mpanao gazety ihany koa ilay gazety, izay ahitana fampiharana sy lesona (teôria)-na tsia. Mpianatra mpanao gazety iray somary nitsikera momba ilay atrikasam-piofanana  [ja], hoy izy nilaza:
Ho an'ny mpianatra tahaka anay izay mianatra “inona no vaovao”, hitako fa sarotra be ny manazava hoe inona izany ho an'ny mponina ao an-tanàn-dehibe.
Mpianatra-asa hafa iray nahita fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook  [ja] ho toy ny antony mampandrisika ny olo-tsotra mpanao gazety:
Olona 663 no nahita ilay lahatsoratra tao amin'ny Facebook, nosoratanà olo-tsotra tia mampita vaovao. Maro be ireo nizara ny lahatsoratra momba ny fampisehoan-kira nataon'ny klioban'ny Lisean'i Otsuchi Junior. “Tahaka ny mahatsiaro manoratra lahatsoratra marobe aho!” hoy ny olo-tsotra tia mampita vaovao iray, raha nampiseho azy ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook tamin'ny iPhone-ko aho. Tsy tahaka ny taratasy fampiasan'ny fampahalalam-baovao, toa hita fa antony iray mampandrisika ny mpanao gazety ny fifandrimbonana (interactivité) avy amin'ny lahatsoratra ao amin'ny aterineto, ka afaka mahita-maso ny isan'ny mpamaky sy ny fanehoan-kevitra ara-potoana izy ireo.
Mpianatra asa mampianatra maka sary ho an'ny olom-pirenena ao Otsuchi. Nahazoan-dalàna ny sary.
Nikarakara atrikasa  [ja] momba ny fampiasana fakan-tsary nomerika sy finday handraketana vaovao ny mpianatra sasany:
Raha nanatontosa [atrikasa] tao amin'ny hotely fisotroana dité aho, hoy ny olom-pirenena iray nilaza tamiko, “Misy zavatra tiako ambara foana. Te-ho lasa olo-tsotra tia mampita vaovao aho miaraka amin'ireo mpandray anjara rehetra hafa ato amin'ny hotely izay miaraka amintsika. Saingy tsy mahay maka sary aho, tsy mahay mampiasa solosaina aho. Ka tsy afaka manao izany asa fanaovan-gazety izany.” Izany indrindra no antony nikarakarako ity atrikasa ity. Rehefa tapitra ny atrikasa, nanjary lasa olo-tsotra mpampita vaovao ny mpiara-misotro dite ao amin'ny fampiantranoana vonjimaika zana-paritra faha-20 [ho an'ny olom-pirenena nafindra toerana]! Tena faly be amin'izy ireo aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/10/24/39381/
 Japana 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2011-special-coverage/japan-earthquake-tsunami-2011/
 fanentanana fanangonam-bola tamin'ny aterineto: https://readyfor.jp/projects/otsuchi-future-paper
 Otsuchi Mirai Shimbun: http://otsuchinews.net/newspaper/20121015/147
 Ivom-pampianarana ho an'ny mpanao gazety ao Japana: http://jcej.info/
 Volunteer Info: http://volunteerinfo.jp/
 Azo jerena ao amin'ny aterineto: http://otsuchinews.net/
 somary nitsikera momba ilay atrikasam-piofanana: http://d.hatena.ne.jp/jcej/20120912/1347458520
 nahita fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook: http://d.hatena.ne.jp/jcej/20120908/1347112921